United States inoda kurambidza semiconductor kupinda kuHuawei | Linux Vakapindwa muropa
Zvinoita sekuti chibvumirano chakavimbisana Mutungamiri weUnited States, Donald Trump, Huawei akasara muzvipikirwa zvakapusa, Iye zvino hurumende yeUS iri kufunga dzimwe nhanho dzakanangana neHuawei Technologies Co Ltd, izvo zvaizotadzisa kupinda kwekambani kune michina yeUS-made semiconductor.
Kare pano pablog taive takagovana nhau nezve "chibvumirano" icho chakange chasvika kubvumira Huawei kuti ienderere mberi nekuita kwayo zvakajairika. Chibvumirano ichi chakaitwa gore rapfuura muna Chikumi panguva yemusangano weG20, muOsaka, Japan, Donald Trump naXi Jinping, umo vakabvumirana kutangazve kutaurirana kwekutengeserana.
Iye zvino mune dzimwe nhau dzichangopfuura, Reuters yakashuma kuti vakuru vehurumende vari kufunga nezvekuchinja kune wekunze Direct Chigadzirwa Mutemo, iyo inoisa zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa kunze kwenyika ayo akavakirwa paUS tekinoroji pasi pemitemo yenyika.
Zvichienderana neshanduko dzakatsanangurwa, idzo dziri kunyorwa neDhipatimendi reZvekutengesa, Vagadziri vekuUS vanofanirwa kuwana rezinesi rakakosha kushandisa michina yeUS kugadzira machipisi eHuawei.
Parizvino, iyo Dhipatimendi reAmerica reZvekutengeserana rakaramba kutaura nezvesarudzo.
Asi mutauriri weCommerce akataura mhosva dzichangoburwa dzeUS kurwisa Huawei, kusanganisira rangano yekubira zvakavanzika zvekutengeserana, «simbisa zvakare kukosha kwekuchenjerera kana uchifunga nezvekunyorera marezenisi. United States inoramba ichinetseka zvikuru nezveHuawei.
Kutungamira chip chip kutengesa kuHuawei, zviremera zveU.S. zvinoshandura mutemo wekunze wakanangana nechigadzirwa, icho chinoisa zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa kunze kwenyika zvichibva tekinoroji yeUS kana software kumitemo, sekunge Vachagadzirisa zvigadzirwa zvakagadzirwa muUSA.
Uye ndezvekuti Huawei anga ari mumachinjiro emutungamiri weUnited States, VaDonald Trump, kwemwedzi yakati wandei ikozvino, kubvira gore rapfuura rakaverengerwa mune runyorwa runyoro runotadzisa makambani mazhinji eAmerica kuita bhizinesi naro.
Pamusoro pekuti United States iri kuyedzawo kunyengetedza nyika dzakabatana kuti dzibvise michina yeHuawei kubva kunetiweki dzinotevera dze5G nezvikonzero zvekuti inogona kushandiswa mukusora, izvo Huawei akaramba achiramba kupomedzerwa kwazviri.
Iye zvino United States inoda kunanga maketeni ekupa izvo zvisiri kusvika, Reuters yakati.
Chinangwa cheshanduro dzakatsanangurwa kune Yekunze Direct Zvigadzirwa Rule ndiko kudzora China tekinoroji kumberi, Asi pane njodzi yekuti mitemo yakasimba inogona kukanganisa iyo yepasi rese semiconductor kupa cheni uye nekukuvadza makambani eAmerica, vezvemabhizimusi vakaudza Reuters.
Chirevo chakawedzera kuti shanduko dzave kukurukurwa kwemavhiki., asi ivo vakango tariswa munguva pfupi yapfuura uye vasati vaongororwe neMutungamiri Trump.
Sekureva kwemumwe muongorori, anoti danho reUS rekudzivirira kupinda kweHuawei kumidziyo yechitatu chinhu chakakodzera kuita, tichifungidzira kuti zvirevo pamusoro pekambani izvi ndezvechokwadi.
"Zvisinei, zvinoramba zvichionekwa kuti zvirevo izvi zvine chekuita here," akadaro Mueller, achiona kuti United States haina kumbopa humbowo chaihwo hwezvairi kutaura. “Zvichakadaro, idzi inyaya dzakaipa kuHuawei nevatengesi venyika yechitatu. "Njodzi ndeyekuti tichazopedzisira tave nemaketani maviri epamusoro-soro, imwe yeHuawei uye imwe yepasi rose, inoshanda yakaparadzaniswa kubva kune mumwe nemumwe."
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo noti, iwe unogona kutarisa iro rekutanga bhuku Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » US inoda kumisikidza semiconductor kupinda kuHuawei
Hatisi kuzopedzisa imwe yeHuawei, asi imwe yezvigadzirwa zvakagadzirwa kuChina, pasina zvivakwa zveU.S. kana chero kuvimba nehunyanzvi hwayo, kungave kuburikidza nekutenga kana nekutsiva.
Zviripachena kuti zvinotora makore mashanu, zvakanyanya, asi iwo haasi kure kure.
Uye iyo mhosva ichave pane iyo ultraconservative pfupi-termism.
Uye kuti ivo havatambe neChina iyo inogadzira 95% yemishonga yavo, uye chete nekuvhara iko kutengeserana vhiki yesarudzo iyo Trump yaizorasikirwa.